हैदराबादको हिउँ ???
म बस्ने शहरमा अहिले पनि तापमान ३२ डिग्रीको हाराहारीमा छ भने गर्मीमा ४३-४४ सम्म पनि पुग्छ । तर यो गर्मीमा पनि हिँउ र बरफमा खेल्ने शौख छ भने त्यो पनि पाईन्छ । यो मेरो अघिल्लो पोष्टमा भए जस्तै कुनै कपास वा अन्य कृतिम हिँउको कुरा भने हैन । चिसो र नरम र सेता हिउँ, जुन बन्नलाई तपामान शुन्य भन्दा तलै जानु पर्छ ।
अघील्लो हप्ता फुर्सदको उपयोग गर्दै म पनि पुगेगी थिएँ त्यही हैदराबादको हिउँ खेल्न । माथी नै भनि सकिएको छ यो कपास वा अन्य सेता हल्का बस्तु प्रयोग गरेर बनाईएको हिउँ भने हैन । बास्तबमा यो कृतिम तरिकाबाट बनाईएको प्राकृतिक हिँउ हो । अर्थात यहाँ रहेको snow theme park को हो जहाँ गर्मी ठाउँ र कहिल्यै हिमपात भएको नदेखेकालागि एउटा विशाल “Indoor- snow theme park” निर्माण गरिएको छ ।
अत्याधुनिक चिस्यान प्रविधि प्रयोग गरेर यहाँ जमिनमा हिँउ मात्रै बनाईन्न, हरेक एक घण्टाको अन्तरालमा एकचोटी कृतिम रुपमा हिँउ पारिन्छ पनि ।
बाहिर तपक्रमबाट एकै चोटी यो चिसो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा शरिर तैयार नभैसकेको हुने हुनाले । टिकट लिएर यो Indoor- snow theme park मा छिरेपछि १० मिनेट जत्ति सबैलाई करिब १० डिग्री तापक्रम रहेको च्याम्बरमा राखिन्छ । त्यो भन्दा पहिला हिँउमा हिँडदा लगाउनु पर्ने ज्याकेट, बुट मोजा आदि दिईन्छ र एकैछीन कम तापक्रममा शरिर अनुकूल भएपछी माईनस ५ डिग्री आसपास तपक्रम हुने गरी बनाईएको मुख्य क्षेत्रमा प्रवेश गराईन्छ ।
आजको पोस्टमा यहि गर्मी ठाउँमा कृतिम तरिकाले बनाईएको प्राकृतिक हिउँको तस्विरहरु
(३२ डिग्री बाट शुन्य डिग्री जाने तयारी)
(पार्कमै वितरीत न्यानो लुगा लगाएर कम तापक्रमको च्याम्बरमा हिउँसंग भिड्ने तयारी गर्दै)
(कृतिम हिउँमा रमाउँदै)
(स्नो भलिबलमा रमाउँदै गर्मि ठाउँका भ्रमणकर्ताहरु)
(कृतिम हिमपात –तस्बिरमा सायद राम्रो संग देखिदैन क्यारे)
(हिउँ संग रमाउदै बालबालिकाहरु)
(पानी परेको तस्बिर उतार्नु जस्तै पर्दा पर्दैको हिउँ लाई तस्बिरमा उतार्नु पनि गाह्रो हुने रहेछ)
कोही छ प्रतिस्पर्धी ?
केही समय अगाडि मैले यहि ब्लगमा भारतमा मोबाईल फोनको शुल्क घटाउने होडबाजीको बारेमा एउटा पोस्ट लेखेकी थिएँ । मिनेटको आधारमा हुने कल रेटको बदला प्रति सेकेण्ड १ पैसाको पल्स रेट सुरु गरेर टाटाले भारतको मोबाईल प्रदायकमा शुल्क घटाउने गज्जबको प्रतिस्पर्धा सुरु गर्‍यो ।
लागेको थियो, सायद मोबाईलको शुल्क अब न्यूनतमा बिन्दुमा पुगीसक्यो र त्यो भन्दा तल जान सक्दैन । तर त्यो आंकलन पनि गलत सिद्द भयो जब अर्को प्रदाएक एयरसेलले त्यसको केही समय पछि नै २ सेकेण्डको एक पैसा हुने कल रेट निकाल्यो ।
त्यसको २-३ हप्ता नबित्दै मिनेटको २९ पैसा, तीन मिनेट फोन गरे अर्को तीन मिनेट फ्रि हुँदैं १० पैसा प्रति मिनेट र एक रुपैयाको एक कल तर एक कल बराबर १० मिनेट हुने सेवा समेत निस्केका छन । अब भने यो प्रतिस्पर्धा कहाँ पुग्छ अन्दाज गर्न मुश्किल छ ।
आजकल नयाँ वर्ष र यहाँको ठूलो चाड पोंगलको आगमनका कारण हरेक बस्तु वा सेवामा विभिन्न “अफर” हरु देखिन थालेका छन । आजको पोस्टमा यस्तै केही अनौठो अफरहरु:
(क्रिसमस र नयाँ वर्षको उपलक्षमा एउटा कुखुरा किन्दा ४ वटा अण्डा फ्रि )
(Buy 1 get 1 free मा अब आकर्षण रहेन--सामान बिकाउनु छ भने यस्तै गर्नु पर्छ )
(१ रुपैयाँको सिममा ७ रुपैयाँको टक टाईम, त्यो पनि लाईफ टाईम भ्यालिडिटी र एक सेकेण्डको १ पैसा मात्र—अब हरेक कलको लागि भिन्दै नम्बर किने पनि हुन्छ )
(त्यसो त औषधिको व्यापारलाई यदाकदा White Mafia भनेको पनि सुनिन्छ । तर यसरी औषधिमा समेत यस्तो अफर भने मैले देखेको पहिलो पटक नै हो )